Isamsung Samsung Galaxy S10 | I-Androidsis
Usuku olwalulindelwe ngabaninzi, ngakumbi abalandeli abathembekileyo benkampani ye-Samsung. Emva kweenyanga ezininzi ngamarhe kunye nokuvuza, Isamsung yazisa ngokusesikweni uluhlu lweGPS S10, Uluhlu olwenziwe ngeetheminali ezintathu, i-S10e sisixhobo sokungena kwisiphelo esiphakamileyo esihlala simela iSamsung S.
Kwiiveki ezidlulileyo, inani lamahemuhemu ahambelana neGPS S10 lonyuke kakhulu, lisivumela ukuba sifumane umbono ocacileyo woluhlu olutsha lwe-S10 inkampani yaseKorea esandula ukuveza nje imizuzu embalwa edlulileyo. Kodwa ke, zazingamahemuhemu. Ukuba ufuna ukwazi zonke Ukucaciswa kweGPS S10, amaxabiso kunye neempawu siza kukubonisa apha ngezantsi.
1 Isamsung ayizange ithi ewe kwinotshi
2 Isivamisi seFingerprint phantsi kwesikrini
3 Ikhamera yeekhamera ezintathu nayo iza kwi-S10
4 Amandla okusindisa
5 Ibhetri yonke imini nangaphezulu
6 Amaxabiso kunye nokufumaneka kwe-Samsung Galaxy S10
Isamsung ayizange ithi ewe kwinotshi
Isamsung ingomnye wabavelisi abambalwa uxhathise utyekelo phantse lwabo bonke abavelisi lokukopa inotshi Ivela kwisandla se-iPhone X, inotshi ethi kwi-Android ayikhange icinge ukuba kukho inkqubela phambili ephumeze itekhnoloji eyimfuneko ukuze ikwazi ukuvula isixhobo ngetekhnoloji efana ne-ID yeFace, ekuphela kwenjongo yeli liso Phezulu kwesikrini.iscreen, njengoko igcina izinzwa ezahlukeneyo kunye neekhamera.
Isamsung ikhethe ukwenza inkqubo entsha enescreen sonke, ukudala uhlobo lweziqithi sisikrini sokubeka ikhamera / s zangaphambili kunye nolunye uhlobo lwescreen esinomfanekiso wetiardrop kwinxalenye ephezulu esembindini. U-LUluhlu olutsha lwe-S10 lusinika uyilo lwesikrini kunye nesiqithi, apho zikhona iikhamera / ii-s ezibonelela ngesiphumo esinomtsalane ngakumbi kunokuba bekusetyenzisiwe inotshi.
Iscreen semodeli esisiseko, i-Galaxy S10e, isinika ubungakanani obuthe tyaba bee-intshi ezi-5,8, ngelixa i-Galaxy S10 kunye ne-S10 + zidibanisa i-6,1 kunye ne-6,4-intshi ejikeleze isikrini ngokwahlukeneyo. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-Samsung yeyona mveliso iphambili yezikrini ze-OLED kwintengiso, asithandabuzi ukuba ezi zikrini zezona zibalaseleyo kwintengiso yemfonomfono, isinika imibala ecacileyo nebukhali esingafumani nakwezinye iiterminali.
Isivamisi seFingerprint phantsi kwesikrini
Nangona kulibaziseka ngakumbi kunokuba abasebenzisi be-Samsung bebengathanda, uluhlu lweGPS S10 ibonelela nge Isenzeli se-Ultrasonic yeminwe phantsi kwesikrini, Ukuze sikwazi ukuvula i-terminal ngokuthe ngqo ngokuthinta nayiphi na indawo yesikrini kwisantya esifana kakhulu nesifunyenwe kwisenzi esivakalayo esingasemva kwesixhobo. Ukongeza, ngokungafaniyo ne-sensor ye-optical, i-ultrasonic isebenza nokuba sikwindawo efumileyo.
Ukongeza kwi-sensor yeminwe, i-Samsung iyaqhubeka nokubheja Inkqubo yokuqonda iris, Inkqubo engasinikeli ukhuseleko olufanayo esinokubonelelwa yitekhnoloji yokwazisa ye-3D, enjengaleyo ibonelelwa yi-ID yobuso buka-Apple, kodwa iphumelele phakathi kwabalandeli benkampani.
Ikhamera yeekhamera ezintathu nayo iza kwi-S10
Ngokutsho kwabo bazi malunga nokufota, kokukhona iikhamera zisisixhobo esidityanisiweyo, kokukhona kungcono. Ngcono, okoko nje ixhaswayo yisoftware ekwaziyo ukudibanisa kunye nangoko ukuqhubekeka kwezinto ezenziweyo zekhamera nganye. Ngale ndlela, i-Samsung isebenzisa ubuGcisa bobuGcisa ukufezekisa iziphumo ezigqwesileyo.
Kakhulu I-Galaxy S10 kunye neGPS S10 + zisinika iikhamera ezintathu ngasemva, Iikhamera ezintathu ezinenjongo eyahluke ngokupheleleyo: i-telephoto, i-engile ebanzi kunye ne-engile ebanzi ye-ultra, esinokusebenza ngayo esinokuthi singakufumani kwezinye iiterminal ezineekhamera ezimbini kuphela.
Njengoko benditshilo ngasentla, i-Samsung yamkele i-infinity O isikrini, isikrini esinikezela isiqithi okanye ukugqobhoza phezulu ekunene kwesikrini. Zombini i-Galaxy S10e kunye neGPS S10 zidibanisa ikhamera enye ngaphambili, ngelixa i-Galaxy S10 + idibanisa iikhamera ezimbini, enye yazo inobunzulu be-RGB eya kusivumela ukuba sithathe ii-selfies kwaye siphazamise imvelaphi yeeselfie esizithathayo. Ukongeza, ikwasivumela ukuba songeze uthotho lweefilitha ngaphambi kokuthatha ifoto ukuze ubone ukuba siyintoni na isiphumo.
Kwakhona, kwaye njengesiqhelo kwisivumelwano esivaliweyo kunye ne-Samsung, i-Galaxy S10 iya kuba sisiphelo sokuqala sokufikelela kwintengiso kunye neprosesa yamva nje yeQualcomm, iSnapdragon 855, nangona Iya kwenza kuphela kumazwe aqhelekileyo anje ngeMelika, Latin America naseAsia.
Amanye amazwe, kubandakanya yonke iYurophu, kuya kufuneka sihlale kulo Exynos 9820, iprosesa ethi kwisizukulwana ngasinye esitsha, inyuse kakhulu ukusebenza kwayo, ubukhulu becala ifana nale inikezelwa yiQualcomm Snapdragon ehambelanayo.
I-Galaxy S10e iyafumaneka kuhlobo olunye lwe I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina.
Inguqulelo ephakathi, iGPS S10, ukuba yome, iyafumaneka kwi Iinguqulelo ezimbini ze-128 kunye ne-512 GB yokugcina, ehamba ne-6 kunye ne-8 GB ye-RAM ngokwahlukeneyo.
Imodeli ephezulu kuluhlu, IGPS S10 + iyafumaneka kwiinguqulelo ezintathu. Inguqulelo ene-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina, enye ine-8 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina kunye nohlobo olubiza kakhulu, olusinika i-12 GB ye-RAM kunye ne-1 TB yokugcina.
Ayizizo zonke iinguqulelo ziyafumaneka ukusukela namhlanje, Ke ukuba sifuna ukukhetha imodeli ethile, kuya kufuneka silinde ukubakho ukuze sandise.
Ibhetri yonke imini nangaphezulu
Ibhetri iyaqhubeka yenye yezona ngxaki zinkulu kwii-smartphones namhlanje. Logama nje zombini uGoogle kunye noApple bengakhange bajolise ekuphuculeni ukusetyenziswa kwezixhobo zeenkqubo zabo zokusebenza, Siya kunyanzeliswa ukuba sihlawulise i-smartphone yethu yonke imihla. I-Galaxy S10e isinika ibhetri ye-3.100 mAh, ngelixa i-Galaxy S10 kunye neGPS S10 + zisinika i-3.400 mAh kunye ne-4.100 mAh ibhetri ngokwahlukeneyo.
Enye yazo ibonelelwa yiGPS S10 kunye ne-S10 + ifumaneka kwifayile ye- ukuguqula inkqubo yokutshaja ngomgaqo weQi, esivumela ukuba sibize nayiphi na enye i-smartphone okanye isixhobo esihambelana nale nkqubo yokutshaja, umsebenzi ofanelekileyo xa siphuma endlwini kwaye siqonda ukuba sibize ii-headphone okanye ukuba iqabane lethu le-smartphone alinabhetri ngaphambi kokuba lilahleke kumall ohambelana nalo.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kwe-Samsung Galaxy S10
Iimodeli ezintathu ezintsha eziyinxalenye yoluhlu lweGPS S10 ziya kuya kwintengiso ngo-Matshi 8, kodwa ukusukela ngoku ukuya phambili sinokuyigcina kwiwebhusayithi. Amaxabiso nganye nganye kwiimodeli ezikuluhlu lweGPS S10 zichaziwe apha ngezantsi:
I-Samsung Galaxy S10e -6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina: i-759 euro
I-Samsung Galaxy S10 -6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina: i-909 euros
I-Samsung Galaxy S10 + -8 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina: i-1.259 euro
I-Samsung Galaxy S10 + -12 GB ye-RAM kunye ne-1 TB yokugcina: i-1.609 euro.
Kubo bonke abasebenzisi abagcina i-Samsung Galaxy S10 okanye i-S10 +, baya kuba nakho fumana i-Galaxy Buds emhlophe mahala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Samsung Galaxy S10 ngoku isemthethweni: yonke into ekufuneka uyazi kwividiyo